तीजका गीत रेकर्ड गराउँदैछु - कुराकानी - साप्ताहिक
 कला पंगेनी, गायिका
सांगीतिक व्यस्तता कस्तो छ ?
रेकर्डिङदेखि सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने क्रम जारी छ । अहिले चाहिँ तीजका गीत रेकर्ड गराइरहेकी छु ।
तीज लागिसक्यो र ?
तीज आउन केही महिना बाँकी भए पनि हामी संगीतकर्मीहरूलाई केही महिना पहिलेदेखि नै तीज लाग्छ ।
यसपटकको तीजमा कस्ता गीत ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
मैले हरेक वर्षका तीजमा एक–एकवटा गीत ल्याउँदै आएकी थिएँ । यसपटक दुर्गा पंगेनी तथा नरेन्द्र बस्नेतको शब्द तथा लय संकलनमा दुई भिन्न गीत रेकर्ड गराउँदैछु ।
तपाईंका चलेका तीज गीत कुन–कुन हुन् ?
मैले हालसम्म १४ वटा तीज विशेष गीत गाएकी छु । तीमध्ये गत वर्ष गायक बद्री पंगेनीसँगको चिटिक्कै मलाई सुहायो तथा परार सालको पार्टी घरैमा गीत श्रोताहरूले बढी मन पराउनु भएको थियो ।
तपाईंको राष्ट्रिय भाव बोकेको गीत त खुबै चल्यो होइन ?
पशुपति शर्मासँग गाएको जोगाउनु छ कालापानी..युट्युबमा १० लाखभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । त्यसबाट मैले चारवटा एवार्ड समेत जिते ।
लोकदोहोरीको क्रेज बढेको हो कि घटेको ?
विगतको तुलनामा त बढेकै भन्नु पर्छ । लोकदोहोरी गीतका आफ्नै श्रोता छन् । सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने क्रममा दर्शकहरूले दर्शाउनु भएको मायाबाटै लोकेदोहोरीको क्रेज मापन गर्न सकिन्छ ।
लोकदोहोरी स्रष्टाको आर्थिक पाटो पनि उकासिएको हो ?
आधा दशकयता चलेका लोकदोहोरी गायक–गायिकाले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । अधिकांश गायक–गायिकाका आफ्नै युट्युब च्यानल छन्, त्यहाँबाट आम्दानी समेत भैरहेको छ । त्यसबाहेक देश–विदेशमा आयोजना हुने सांगीतिक कार्यक्रमले पनि हाम्रो जीवनस्तर उकासेको छ ।
अरू विधाका गीत नगाउने ?
लोकदोहारी गायिकाकै रूपमा स्थापित भएकाले अन्य विधाका गीत गाउन भ्याएकी छैन । नढाँटी भन्नु पर्दा मलाई आधुनिक शैलीका गीत गाउने रहर छ । चाँडै नै त्यो रहर पनि
पूरा गर्दैछु ।
पन्छीले पहिचान दिलायो आश्विन १, २०७६
परम्परागत चित्रकारितामै आत्मसन्तुष्टि भाद्र ३०, २०७६
प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दिनँ भाद्र २९, २०७६
भारी वर्षाको पर्खाइमा छौं भाद्र २४, २०७६
माइकको तारमा अल्झिएर लडें भाद्र १७, २०७६
तीजको दिन बिहान तीनै बजे पशुपतिनाथ पुग्छु भाद्र १४, २०७६